Amaxabiso Amanani | Ucanzibe 2022
Udidi Amaxabiso Amanani
Ukhokelwe apha ukuze ufumanise malunga neentsingiselo ezingama-222. Ukufunda ngakumbi, nazi iintsingiselo ezintathu zokomoya ezingama-222 kunye nezizathu zokuba uqhubeka ubona ama-222 kuyo yonke indawo.
Izizathu ezi-4 zokuba kutheni Ubona u-5: 55-Intsingiselo ye-555
Ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga neentsingiselo ezingama-555. Ukuze ufunde okungakumbi, nazi iintsingiselo ezi-4 zokomoya ezingama-555 kunye nezizathu zokuba uqhubeke ubona ingelosi inombolo 555 kuyo yonke indawo.
Ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga nentsingiselo ye-1122. Ukuze ufunde okungakumbi, nazi iintsingiselo ezi-5 zokomoya zika-1122 kunye nezizathu zokuba uhlale ubona ingelosi engu-1122 kuyo yonke indawo.
Izizathu ezi-6 zokuba kutheni ubona i-12: 22-Intsingiselo ye-1222
Ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga nentsingiselo ye-1222. Ukuze ufunde okungakumbi, nazi iintsingiselo zokomoya eziyi-1222 kunye nezizathu zokuba uqhubeka ubona i-1222 okanye i-12: 22 kuyo yonke indawo.
Izizathu ezi-7 zokuba ubona i-911-Intsingiselo ye-9: 11
Ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga nentsingiselo ye-911. Ukuze ufunde okungakumbi, nazi iintsingiselo ezisi-7 zokomoya ezingama-911 kunye nezizathu zokuba uqhubeka ubona i-911 okanye i-9: 11 kuyo yonke indawo ngeli xesha lobomi bakho.
Izizathu ezi-4 zokuba kutheni ubona i-888-Intsingiselo ye-888
Ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga neentsingiselo ezingama-888. Ukuze ufunde okungakumbi, nazi iintsingiselo zokomoya ezi-4 ezingama-888 kunye nezizathu zokuba uqhubeka ubona i-888 kweli nqanaba ebomini bakho.
Izizathu ezi-3 zokuba kutheni ubona i-12: 34-Intsingiselo ye-1234
Ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga nentsingiselo ye-1234. Ukuze ufunde okungakumbi, nazi iintsingiselo ezi-3 zokomoya ze-1234 kunye nezizathu zokuba uqhubeka ubona i-1234 kuyo yonke indawo.
Izizathu ezili-10 zokuba ubona iZimpawu zeengelosi-Intsingiselo yeeMpawu zeengelosi
Ukhokelwe apha ukuba ufunde ngemiqondiso yeengelosi. Ukufumana ngakumbi, nolu uluhlu lweempawu zengelosi eziqhelekileyo ezili-13 kunye nezizathu ezili-10 zokomoya zokuba uqhubeka uzibona.
Izizathu ezi-7 zokuba uvuka nge-4: 44 AM-Intsingiselo yokuvuka ebusuku
Ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga nentsingiselo yokuvuka nge-4: 44. Ukuze ufunde okungakumbi, Nazi izizathu ezi-7 zokuba uqhubeka ubona i-444 ezinzulwini zobusuku.
Izizathu ezi-4 zokuba kutheni ubona i-711-Intsingiselo ye-7: 11
Ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga nentsingiselo ye-711. Ukuze ufunde okungakumbi, nazi iintsingiselo ezi-4 zokomoya ezingama-711 kunye nezizathu zokuba uqhubeka ubona i-711 ngeli xesha.
Ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga nentsingiselo engama-666. Ukuze ufunde okungakumbi, nazi iintsingiselo ezintathu zokomoya ezingama-666 kunye nezizathu zokuba uqhubeka ubona ingelosi engu-666 kuyo yonke indawo.
Izizathu ezi-7 zokuba kutheni ubona i-411-Intsingiselo ye-4: 11
Ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga nentsingiselo engama-411. Ukuze ufunde okungakumbi, nazi iintsingiselo ezisi-7 zokomoya ezingama-411 kunye nezizathu zokuba uqhubeka ubona i-411 kuyo yonke indawo.
Izizathu ezi-6 zokuba Ubona 4:44 -Intsingiselo ye-444
Ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga neentsingiselo ezingama-444. Ukuze ufunde ngakumbi, nazi iintsingiselo zokomoya ezi-444 kunye nezizathu zokuba uhlale ubona ingelosi engu-444 kuyo yonke indawo.
Izizathu ezi-5 zokuba kutheni ubona i-000-Intsingiselo ye-000
Ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga neentsingiselo ezingama-000. Ukuze ufunde okungakumbi, nazi iintsingiselo ezintlanu zokomoya ze-000 kunye nezizathu zokuba uqhubeka ubona i-000 kuyo yonke indawo.
Iingelosi zengelosi ezinkulu: Amagama, iintsingiselo, kunye neZodiac Signs - Uluhlu lweengelosi ezinkulu ezinamagama kunye nemihla yokuzalwa
Ukhokelwe apha ukuze ufunde malunga neengelosi eziyi-12. Iingelosi ezili-12 ziyi-Ariel, Chamuel, Zadkiel, Gabriel, Raziel, Metatron, Jophiel, Jeremiel, Raguel, Azrael, Uriel no Sandalphon. Ukuze ufunde okungakumbi, nolu uluhlu lweengelosi ezili-12 kunye nokunxibelelana kwabo neempawu zodiacac.
Izizathu ezi-4 zokuba kutheni ubona i-10: 10-Intsingiselo ye-1010
Ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga nentsingiselo ye-1010. Ukuze ufunde okungakumbi, nazi iintsingiselo ezi-4 zokomoya ezili-1010 kunye nezizathu zokuba uqhubeka ubona inombolo 10:10 kuyo yonke indawo.
Izizathu ezi-5 zokuba kutheni ubona i-11: 11-Intsingiselo ye-1111
Ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga nentsingiselo ye-1111. Ukubona u-11: 11 ngumnxeba wokuvuka. Ukuze ufunde okungakumbi, nazi iintsingiselo ezi-5 zokomoya zika-11: 11 kunye nezizathu zokuba uqhubeke ubona ipateni yamanani 11:11 kuyo yonke indawo.
Ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga nentsingiselo engama-333. Ukuze ufunde okungakumbi, nazi iintsingiselo ezi-4 zokomoya ezingama-333 kunye nezizathu zokuba uqhubeke ubona ingelosi inamba 333 kuyo yonke indawo.
Izizathu ezi-3 zokuba kutheni ubona i-777-Intsingiselo ye-777
Ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga neentsingiselo ezingama-777. Ukuze ufunde okungakumbi, nazi iintsingiselo zokomoya ezi-3 ezingama-777 kunye nezizathu zokuba uqhubeke ubona ingelosi inombolo eyi-777 kuyo yonke indawo.
Ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga nentsingiselo ye-999. Ukuze ufunde okungakumbi, nazi iintsingiselo ezi-5 zokomoya zika-999 kunye nezizathu zokuba uqhubeka ubona i-999 kuyo yonke indawo.
lithetha ntoni u-11: 11
Inombolo yeengelosi ezinamagama angama-444
Inombolo yeengelosi ezingama-911
ngu 1212 inombolo yelosi
lithetha ntoni 10 10 10